ပုဂံဘုရားတွေရှိတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာ ကျောပြောင်ဖက်ရှင် ဝတ်ခဲ့လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် – Askstyle
ပုဂံဘုရားတွေရှိတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာ ကျောပြောင်ဖက်ရှင် ဝတ်ခဲ့လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
သင်ဇာဝင့်ကျော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုရိသတွေအရူးအမူးအားပေးတဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်…. အမြဲတမ်းခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်လ်တွေ ဝတ်တတ်ပြီး အလန်းစား ဘော်ဒီကြောင့် သင်ဇာဝင့်ကျော်တစ်ယောက် ဘယ်လိုပုံတွေ တင်မလဲဆိုတာ အားလုံးက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
သူ့ရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ မိမိယုံကြည်ရာ အနုပညာကို လုပ်ဆောင်ရင်း ရှေ့ဆက်သွားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ပရိသတ်တွေအားပေးမှုက လျော့မသွားဘဲ တိုးတိုးလာတာသာ ဖြစ်ပါတယ်…
ခုလည်းပဲ သင်ဇာဟာ အလန်းစားဖက်ရှင်နဲ့ ပုဂံမှာ မိုးပျံပူဖောင်းစီးခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်…..နောက်ကျောပြောင် အင်းကျီနဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ တကယ့်ကို အလန်းစားပါပဲ…ထုံးစံအတိုင်း ဝေဖန်သူတွေ ရှိသလို အားပေးသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်….
သင်ဇာကတော့ မိမိယုံကြည်ချက်အတိုင်း သူ့ရဲ့ အနုပညာခရီးလမ်းကို ဆက်လျှောက်နေဆဲပါပဲ…. ပုဂံမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်နဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သင်ဇာ့ရဲ့ ဖက်ရှင်အပေါ် အမြင်လေးတွေရှိရင် ပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်နော်..
သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုရိသေတြအ႐ူးအမူးအားေပးတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္…. အၿမဲတမ္းခပ္မိုက္မိုက္ စတိုင္လ္ေတြ ဝတ္တတ္ၿပီး အလန္းစား ေဘာ္ဒီေၾကာင့္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုပုံေတြ တင္မလဲဆိုတာ အားလုံးက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္…..
သူ႔ရဲ႕ ဝတ္ပုံစားပုံေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကေတာ့ မိမိယုံၾကည္ရာ အႏုပညာကို လုပ္ေဆာင္ရင္း ေရွ႕ဆက္သြားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္…ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြအားေပးမႈက ေလ်ာ့မသြားဘဲ တိုးတိုးလာတာသာ ျဖစ္ပါတယ္…
ခုလည္းပဲ သင္ဇာဟာ အလန္းစားဖက္ရွင္နဲ႔ ပုဂံမွာ မိုးပ်ံပူေဖာင္းစီးခဲ့တဲ့ သူမရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္…..ေနာက္ေက်ာေျပာင္ အင္းက်ီနဲ႔ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကေတာ့ တကယ့္ကို အလန္းစားပါပဲ…ထုံးစံအတိုင္း ေဝဖန္သူေတြ ရွိသလို အားေပးသူေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္….
သင္ဇာကေတာ့ မိမိယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာခရီးလမ္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ေနဆဲပါပဲ…. ပုဂံမွာ အလန္းစား ဖက္ရွင္နဲ႔ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီး ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္..
ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း သင္ဇာ့ရဲ႕ ဖက္ရွင္အေပၚ အျမင္ေလးေတြရွိရင္ ေျပာခဲ့ႏိုင္ပါတယ္ေနာ္..